Mie_Mie | Myanmar Mp3 Album
Home / Mie_Mie
Author Archives: Mie_Mie
NICKI MINAJ – PINK FRIDAY TRACKLIST 1. I’M THE BEST 2. ROMAN’S REVENGE (FEAT. EMINEM) 3. DID IT ON’EM 4. RIGHT THRU ME 5. FLY (FEAT. RIHANNA) 6. SAVE ME 7. MOMENT4LIFE (FEAT. DRAKE) 8. CHECK IT OUT (FEAT. WILL.I.AM.) 9. BLAZIN (FEAT. KANYE WEST) 10. HERE I AM 11. DEAR OLD NICKI … Continue Reading →
December 9, 2010 Mie_Mie International Artist New International Albums NICKI MINAJ3Comments
No – Unplugged
No – Unplugged ဘာလိုသေးလဲ အေးဆေးပဲ ငြိမ်းချမ်းပါရစေကွယ် + စည်သူလွင် ခွင့်ပြုပါ + ရွှေထိုက် ဘာကြောင့် ဖြူစင်ချင်တာ ဟုတ်လဲ ဟုတ်တာပဲ + ဖြိုးကြီး ကစားရုပ် + သံသာဝင်း မချင်ရင်ကောင်းမယ် ရူးအောင်ချစ်မိသူ အချစ်မရှိတဲ့ကမ္ဘာ Download Link -> mediafire
November 26, 2010 Mie_Mie အဆိုတော် (အဖွဲ့) New Myanmar Albums No ဖြိုးကြီး စည်သူလွင် ရွှေထိုက် သံသာဝင်း No Leaveacomment
ဇော်ပိုင် – အမိန့်
ဇော်ပိုင် – အမိန့် မင်းမှတ်မိဦးမလား တပ်မက်တဲ့စိတ်တို့စွန့်ပစ် နတ္ထိအခန်း ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး အမိန့် စဉ်းစားကြ အိမ်မက်ဂီတ မင်းမရှိတဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလူ မြို့ ပြည Bit Rate: 320 kbps Download Link ifile Mediafire
November 12, 2010 Mie_Mie အဆိုတော် (ကျား) ဇော်ပိုင် High Quality Albums Myanmar Artist ဇော်ပိုင်5Comments
တေးပုလဲ ၈၂ – မြန်မာပြည် သိန်းတန်
မောင့်အချစ်သက်သေ ခရောင်းလမ်း ရွှေဘုံစံ ၈၂ ဆံမြိတ်ပြေကျ သောကတောင်တန်း ဖိုးလမင်းတို့အရွယ် သစ္စာဆိုဖူးသူသို့ စက်စဲကမ်းခြေ မန်းမြေမှာ ၄ နှစ်တာ အဝေးရောက်ချစ်သူ အချစ်သရဲမလေး ချစ်သူဟေမာန် လည်လည်သွားမယ် လူ့ပြည်အတွက်နမူနာ အိမ်မက်ကမ္ဘာ Download link -> ifile
November 11, 2010 Mie_Mie အဆိုတော် (ကျား) မြန်မာပြည်သိန်းတန် မြန်မာပြည် သိန်းတန် 1 Comment
တေးပုလဲ ၈၁ – မြန်မာပြည် သိန်းတန်
တစ်ပါးသူမနမ်းစေချင် မိုးနဲ့မြေနဲ့ အမုန်းကမ္ဘာမကြေ ချစ်စိတ်ငယ်ငယ် မေတ္တာရိပ်မှ တိတ်တခိုးထွက်သူ မြစ်ဆုံကိုလွမ်းတယ် သူဆိုမှသူ မေတ္တာရေလှိုင်း နှင်းပွင့်သစ္စာ (၈၁) စတိတ်ရှိုးနဲ့ တိတ်တခိုး ရွှေမြိုင်မှာပဲနေတော့မယ် စနေထောင့်မှာ ပန်းလှူမယ် ရည်းစားလဲမထားဘူးတော့ အိပ်မက်ထဲက မောင့်ချစ်သူ အချစ် ဝေဿန္တရာ စကားပြော Download Link -> ifile
November 11, 2010 Mie_Mie အဆိုတော် (ကျား) မြန်မာပြည်သိန်းတန် မြန်မာပြည် သိန်းတန် Leaveacomment
ခိုင်မြဲသာ – အမှောင်မှ အလင်းသို့
Download Link -> mediafire
November 9, 2010 Mie_Mie အဆိုတော် (ကျား) ခိုင်မြဲသာ Leaveacomment
ခိုင်မြဲသာ – အချစ်နဲ့ထာဝရ
November 9, 2010 Mie_Mie အဆိုတော် (ကျား) ခိုင်မြဲသာ ခိုင်မြဲသာ2Comments
Reason – မာတိကာ
Track List အမြင်မတော်စရာများ အစိမ်းသက်သက်များ အရာရာမင်း ဘ၀အစစ်ရဲ့မာတိကာ တောင်းပန်တယ် Download link -> mediafire KyawHtet တင်ပြီးသားလေးပါ။ ifile နဲ့မရဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ထပ်မံဝေငှလိုက်တာပါ။
October 21, 2010 Mie_Mie အဆိုတော် (အဖွဲ့) အောင်လ Myanmar Artist New Myanmar Albums Reason Reason9Comments
စည်သူလွင် – ညအပြင်းစား
Track List ညအပြင်းစား သူငယ်ချင်း စိုး တို့ဝေးပြီ နယ်လွန်စိတ် မမေ့နိုင်ခဲ့ အမှားအယွင်း နှလုံးသားခင်းလမ်း စောင့်နေဦးမယ် မြင်းရိုင်း Download Link : mediafire
September 15, 2010 Mie_Mie အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စည်သူလွင် Myanmar Artist စည်သူလွင်2Comments